बालेन शाहले चुनावमा कति खर्च गरे ? हेर्नुस् विवरण - jagritikhabar.com
बालेन शाहले चुनावमा कति खर्च गरे ? हेर्नुस् विवरण
७ असार, काठमाडौं ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्च सार्वजनिक गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले निर्वाचनमा गरेको खर्च सार्वजनिक गरेका हुन् ।
ढिला गरी खर्च सार्वजनिक गरेकोमा माफी माग्दै शाहले आफूले चुनावमा ३ लाख ९४ हजार ४८९ रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएका छन् । जसमध्ये एक लाख मतगणनाको समयमा मात्रै खर्च भएको साहको भनाइ छ ।
खर्च सार्वजनिक गर्दै मेयर साह लेख्छन्, ’खर्चको विवरण केहि समय अगाडि नै सार्वजनिक भइसक्नु पर्ने थियो तर विभिन्न कारणहरूले सो ढिलो भएकोमा माफी चाहन्छौँ । हाम्रो चुनावी अभियानमा जम्मा खर्च तीन लाख चौरानब्बे हजार चार सय उनान्नब्बे रुपैयाँ (रु. ३,९४,४८९) भएको छ ।
जसमा मतगणनाको समयमा मात्रै १ लाख भन्दा बढी भएको थियो । मतगणना ढिलो भएर निर्वाचन प्रक्रियालाई लामो र बोझिलो मात्रै बनाएको छैन, उम्मेदवारका लागि महँगो बनाइरहेको छ । यसमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
र, भन्नै पर्ने कुरा छ ( एउटा उम्मेदवारका रूपमा हामीले जुन साथ र विश्वास पायौँ, त्यसलाई संसारको सबै भन्दा शक्तिशाली कम्प्युटरले जस्तो सुकै तालिकामा कुनै पनि सङ्ख्या राखेर देखाउन सक्दैन । त्यो अमूल्य साथ र विश्वासले दिएको जिम्मेवारी पुरा गराउन हामी हरसमय खटिरहनेछौँ ।’
खोलामा बाढी आउँदा १३ घरपरिवार विस्थापित, २५ घर डुबानमा
झापाको रतुवा खोलामा अविरल वर्षापछि आएको बाढीले जमिन कटान गर्दा १३ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् भने २५ घर डुबानमा परेको छ ।
विस्थापत हुनेमा दमक–७ का खड्ग लिम्बू, राजेस किस्कु, विष्णु लिम्बू, मनोज मास्के, सुवास लिम्बू, भारती तामाङ, रामकुमारी लावती, लाक्पा शेर्पा, गोमा तामाङ, डिकबहादुर गुरुङ,
सूर्यमान आचार्य, दीपक गुरुङ र विमल किस्कुको परिवार रहेको छ । उनीहरुको घरमा क्षति पुगेकाले नेपाल प्रहरी र स्थानीयवासीको सहयोगमा उद्धार गरी सुरक्षित स्थान र आफन्तको घरतर्फ सारिएको जनाइएको छ ।